कलाकार मनोज गजुरेलले सुटुक्क दो’श्रो बि’वाह गरेको थाहा पाएर पुर्वप’त्नी मीनाले दिइन् यस्तो प्र’तिकृया : – Sadhaiko Khabar
कलाकार मनोज गजुरेलले सुटुक्क दो’श्रो बि’वाह गरेको थाहा पाएर पुर्वप’त्नी मीनाले दिइन् यस्तो प्र’तिकृया :
प्रकाशित मिति: सोमबार, आश्विन २५, २०७८ समय: १८:१०:४०
‘स-परिवार मानव सेवा आश्रम (कौशलटार)मा का बुवाआमालाई खाना खुवाएर/खाएर विवाह सम्पन्न गरेका छौँ,’ मनोजले भनेका छन्। मनोजका अनुसार मञ्जु न्या’य सेवाकी कर्मचारी हुन्। मनोजले पहिलो पत्नी मीना ढकालसँग ४ वर्षअघि सम्बन्धवि’च्छेद गरेका थिए।
यस्तो छ मनोजको स्टाटस :
आफन्त, साथी तथा शुभचिन्तकहरुमा सुखद जानकारी ! जीवन सधैँ सरल रेखामा नहिँड्ने रहेछ। मेरो लामो वैवाहिक जीवन ४ वर्ष पहिले का’नुनी रुपमा टुंगिएको कुरा यहाँहरुलाई विदितै छ। त्यसयता म मेरा छोरा र छोरीको एकल अभिभावक भएर बसिरहेको जानकारी पनि जगजाहेर नैतिकताको छ।
जीवनयात्राको दौरानमा आत्मीय साथको आवश्यकता महशुस हुनु स्वाभाविक हो। त्यसैगरी मेरा बाबु-नानीको शिक्षा, स्वास्थ्य र भविष्यको बारेमा संवेदनशिल हुनुपनि जरुरी थियो। यी दुबै अवस्थामा साथ दिने सहयात्रीको अभाव समय क्रममा ख’ड्किँदै आयो। बाबुनानीको आग्रह पनि यस्तै आउन थाल्यो।
यसै क्रममा नेपाल सरकारको न्या’य सेवाकी अधिकृत मन्जु पोखरेलजीसँग मेरो चिनजान हुनपुग्यो। बिस्तारै हाम्रो घनिष्ट’ता बढ्न थाल्यो। एक खालको परिवेश र उस्तै खालको भोगाइबाट गुज्रिएका हामी अन्ततः सहयात्रा गर्ने निर्णयमा पुग्यौं।
एकअर्काका जि’म्मेवारीलाई साझा जिम्मेवारी मानेर पूरा गर्ने बा’चा गर्यौं। अगाडि आ’इपर्ने सु:ख/दु:खुलाई मिलेर स्वीकार र प्रति’कार गर्ने संक’ल्प लियौं। हामीलाई यो निर्णयमा पुग्न हाम्रा बाबुनानीहरुको सुझाव र सहमतिले पनि ठूलो मद्दत गर्यो।
सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथीहरुलाई सादर अनुरोध छ- कृपया मेरो व्यक्तिगत जीवनका बारेमा का’ल्पनिक समाचार नलेखि दिनुहोला। मन्जुजीको इज्जत र प्रतिष्ठामा आँ’च आउने अम’र्यादित कथा नकथि’दिनुहोला। हाम्रा सन्तानको सुख र शान्तिका लागि परपी’डक ट्रोल र भिडियो नबनाईदिनु होला !
कसैको निजी जीवनका बारेमा कपोक’ल्पित समाचार बनाउने, असम्ब’न्धित मान्छेसँग नाम जाेड्ने, हाम्रो विगतको जीवन, वर्तमानको विवाह तथा भविष्यको योजनाका बारेमा अनुमानकारिता नगर्नुहुन पनि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी हाम्रो नितान्त व्यक्तिगत मामिलाका बारेमा अनावश्यक सामग्री बनाउने कानु’नी, व्यवहारिक र सामाजिक अनुमति कसैलाई नभएको कुरा पनि जोडदार रुपमा जाहेर गर्दछु।
विगतका अरा’जक अन्तर्वार्ता, असा’माजिक क्रियाकलाप तथा अ’भद्र व्य’वहार’का कारण म र मेरा छोराछोरीले ठूलो आ’घा’तबाट गुज्रनु परेको छ। त्यस्ता क्रियाकलापलाई स्थान दिने, उचाल्ने र गिजोल्ने युट्युब, अनलाइन समाचार, टिकटक लगायत संजालका प्रयोगकर्ताहरूलाई पनि भद्र सुझाव छ- कृपया एउटा जिम्मेवार अभिभावक भएर बोल्ने र लेख्ने गर्नुहोला। सामाजिक सञ्जालको चरम दुरुप’योगले आफू र आफ्ना सन्तानलाई पार्न सक्ने ग’म्भीर असरलाई पनि महशुस गर्नुहोला।
मनोज गजुरेलको बिवाहको घोषणा लगतै उनकी पुर्वपत्नी मिना ढकालले पनि केहि प्रतिकृया दिएकी छन् । मनोजको बिवाह पछि उनलाई सामाजिक संजाल मार्फत बिभिन्न कमेन्ट र म्यासेज आउँन थालेपछि उनले यो सबै ब’न्द गर्न र म्यासेज नगर्न अनुरोध गर्दै फेसबुकमा स्टेटस राखेकी छन् । उनले सामाजिक संजालमा अर्का चर्चामा रहेका मुकुन्द घिमिरेको स्टेट्सलाइ शेयर गर्दै मनोज गजुरेलप्रति व्यं’ग्यात्मक रुपमा उनलाई जि’स्क्याएकी छन् ।